MMEMME MAKA ỊRỤ ỌRỤ NA DISKI DISKI DISKI - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2020
Mmemme maka ịrụ ọrụ na diski diski diski
Ọtụtụ mgbe, ezughị ezu ngwá ọrụ ndị a na-enye site na usoro iji rụọ ọrụ na draịvụ ike. Ya mere ọ dị mkpa iji nweta ngwọta dị mma karị, na-enye ohere ịnweta ihe ọmụma zuru ezu banyere HDD na ngalaba ya. Ntụle a ga-atụle n'isiokwu a ga-eme ka ị mara onwe gị na arụmọrụ a na-eji ụgbọala na mpịakọta ya.
AOMEI onye isi aka
Ekele ya maka ngwaọrụ ya AOMEI Partition Assistant bụ otu n'ime usoro kachasị mma nke ụdị ya. Ọrụ niile ga-eme ka ị nwee ike ịhazi mpịakọta diski ike. Tụkwasị na nke ahụ, ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịlele otu akụkụ maka njehie. Otu n'ime atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị bụ ịnyefe osụọrụ OS na ngwaọrụ niile arụnyere na diski ike ọzọ ma ọ bụ SSD.
Na-akwado na ide ihe oyiyi faịlụ na ngwaọrụ USB. A na-enye ọhụụ ihe ngosi mara mma. N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke atụmatụ bara uru, usoro a dị maka iji n'efu, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-ewu ewu karị. N'otu oge ahụ, ọ ga-ekwe omume ibudata nsụgharị Russian.
Weghachite onye inyeaka nke AOMEI
Ọkachamara Ọkara MiniTool
Akụrụngwa a nwere ọrụ dị ike nke na-enye gị ohere ijikọta, kewaa, detuo akụkụ, na ọtụtụ ọrụ. Ọkachamara Ọkara MiniTool bụ nnwere n'efu na nke dị naanị n'ihi na-abụghị nke azụmahịa. Usoro ihe omume ahụ na-enye ike ịgbanwe akara disk, na mgbe ị na-ekepụta nkewa - ụyọkọ ụyọkọ.
Ọrụ nyocha nke elu nwere ike ịchọpụta ndị na-enweghị ike na HDD. Ikike iji tọghata enwere nanị usoro abụọ: FAT na NTFS. A na-etinye ngwaọrụ niile maka ịrụ ọrụ na mpịakọta diski n'ụzọ dị mfe, ya mere ọbụna onye ọrụ na-enweghị uche ga-enwe mgbagwoju anya.
Nbudata Ọkachamara Ọkara MiniTool
Usoro ihe omume ahụ, nke meghere ọtụtụ ohere mgbe ị na-arụ ọrụ na draịvụ ike. N'etiti ndị isi: nkedo cloning na os si na HDD gaa SSD ma ọ bụ vice. Master Master na-enye gị ohere idetuo akụkụ dum - ọrụ a kwesịrị ekwesị maka mkpa ịmepụta ndabere nke otu nkebi na onye ọzọ.
Ihe omume ahụ nwere interface dị mma nke arụ ọrụ niile dị na nkwụsị aka - nke a na-enye gị ohere ịchọta ọrụ a chọrọ. Njirimara nke EaseUS Partition Master bụ na ị nwere ike iji ya zoo otu olu site na ihichapụ leta na ya. Ịmepụta osote os bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na bara uru.
A na-enweta ihe dị mma nke na-arụ ọrụ na Eassos PartitionGuru n'ụzọ bụ isi n'ihi nhazi dị mfe. Ngwa niile dị n'elu panel. Otu ihe dị iche iche bụ ike ịmepụta usoro RAID. Iji mee nke a, onye ọrụ ahụ kwesịrị ijikọ draịva na PC, nke usoro ihe a na-emepụta RAID.
Onye nchịkwa akụrụngwa dịnụ na - enye gị ohere ịchọta mpaghara ndị ahụ achọrọ, ma gosipụta ụkpụrụ hexadecimal na ngọngọ nke panel. N'ụzọ dị mwute, ngwanrọ na-abịa na ntụgharị asụsụ Bekee.
Download Eassos PartitionGuru
Ndị ọkachamara na-egwu Disk Macrorit
Ngosipụta ọrụ ntanetị dị mma nke na-ekewa n'ime ngalaba. Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere iṅomi PC gị maka ndị ọjọọ, ị nwere ike ịhazi ọnyà disk ahụ. Ngbanwe NTFS na FAT dị.
A pụrụ iji ndị ọkachamara na-ahụ maka Diski Mmasị maka n'efu, mana ọ bụ na English version. Akụrụngwa dị mma maka ndị chọrọ ịhazi diski diski ngwa ngwa, ma maka ịrụ ọrụ dị irè ọ na-atụ aro ka ị jiri analogues.
Manawa Disk Manager
Usoro ihe omume maka mmejuputa usoro di iche iche na diski diski, ikwe ka ndi nzaghachite data di elu. N'iji ya tụnyere ngwongwo ọzọ yiri nke a, Ndị ọkachamara na-ahụ maka Mmasị Macrorit na-enye gị ohere iṅomi akụkụ nke ozi efu.
Ị nwere ike ịrụ ọrụ nke trimming ma jikọta mpịakọta diski ike na-enweghị atụfu faịlụ echekwara na ya. Ngwaọrụ ndị ọzọ ga-eme ka ị zoo nkebi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụ ịrụ usoro ntọghata faịlụ.
Acronis Disk Director bụ otu n'ime mmemme kachasị ike nke nwere ọrụ na arụmọrụ maka ijikwa diski ike disk na ihe ndị ọzọ. N'ihi ọrụ nke software a site na Acronis, ndị ọrụ nwere ike weghachite data furu efu ma ọ bụ ehichapụ. Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ ga-ekwe omume ịgbasa olu ahụ, yana ịlele ya maka njehie faịlụ.
Iji igwe mirror na-enye gị ohere ịchekwa ndabere nke ngalaba nke onye ọrụ ahụ họpụtara. Acronis Disk Director na-atụ aro iji nchịkọta diski, nke na-eme ka o kwe omume ịchọta ụyọkọ furu efu na-ewere na eziokwu ahụ bụ na usoro mmebi nke ọrụ a na-egosipụta ụkpụrụ hexadecimal. Enwere ike iji usoro a n'enweghị nsogbu iji rụọ ọrụ kachasị dị irè na HDD.
Ihe nzuzo anwansi
Ihe omume nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ndị isi na diski ike. Ogologo a dị otutu ngwa ngwa Windows Explorer. N'otu oge ahụ, n'etiti ngwá ọrụ ndị dị na shea, ọ dị mfe ịchọta ihe dị mkpa. Akụkụ bụ isi nke Partition Magic bụ na ọ na-enye gị ohere ịhọrọ ọtụtụ ọkpụkpọ arụ ọrụ, nke ọbụla nwere osịrị ya dị iche.
Ịnwekwara ike iji ọrụ nke na-agbanwe usoro faịlụ, n'etiti ha abụọ na-akwado: NTFS na FAT. Na-enweghị ọnụọgụ data, ịnwere ike iweghaa olu ma jikọta akụkụ.
Paragon Partition Manager na-atọ ndị ọrụ ụtọ na ha nwere atụmatụ na ihe mgbaru ọsọ maka iji ha. Otu n'ime ha na-ejikọta ihe oyiyi disk dị ọcha. N'etiti ha bụ faịlụ oyiyi nkwado nke VirtualBox, VMware na ngwaọrụ ndị ọzọ mebere.
Mara ama bụ ọrụ na-enye gị ohere iji tọghata HFS + faịlụ usoro formats ka NTFS na osote. Ndị ọzọ na-arụ ọrụ bụ akụkụ ndị bụ isi: igbasachaa ma gbasaa. Ntọala dị ukwuu nke usoro ihe omume ahụ ga-enye gị ohere ịhazi ọrụ niile na-amasị gị.
Ngwá ọrụ ngwanrọ a tụlere nwere ikike pụrụ iche, nke ọ bụla n'ụzọ nke ya. Ngwaọrụ ike nke software ahụ mepụtara na-enye gị ohere ịchekwa ohere disk ma gbasaa arụmọrụ nke diski ike ahụ. Ọrụ nke ịlele HDD maka njehie na - enyere aka igbochi njehie dị njọ na ọrụ nke ụgbọala ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ịhọrọ usoro ihe omume 2020